Category: बाल साहित्य | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home गृहपृष्ठ बाल साहित्य
पूर्वकथन – आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् । यी बालबालिकाका काँधमै नै देशको भविष्यको घरेट अड़ेको हुन्छ । बालबालिकाहरू राष्ट्रका धरोहर हुन् । निष्कपट, छलकपटविहीन यी बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासले नै कुनै पनि राष्ट्रको विकास सम्भव हुन्छ किनभने यिनै बालबालिका भन्नु नै राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो पूञ्जी हो ।	Read more
हावा – सरस्वती श्रेष्ठ सरू
on: असार ७ , २०७८ सोमबार- ०९:३६
कैले छुन्छ सुस्तरी, कैले बेसरी किन हावा मलाई छुन्छ यसरी ? मार्छ आई साउती जान्छ फर्केर झर्को मानी बसे नि हुन्न तर्केर उडाउँछझैँ गर्छ मेरो पछ्यौरी किन हावा मलाई छुन्छ यसरी ? हात छैन समाई राखौँ भने नि रोक्ने हो र कसरी घाम बने नि देखिँदैन आँखाले छोपुँ कसरी किन	Read more
सानीले कुरो बुझिन् – जयन्ती स्पन्दन
on: जेष्ठ २९ , २०७८ शनिबार- ०७:१०
“सानी ! अझै खाइसकेकी छैनौं ?” आमा भान्साबाटै कराउनु भयो । सानी दूधको गिलास त्यतिकै हातमा लिएर बसिरहेकी थिइन् । फेरी आमाले बोलाउनु भयो– “सानी, खै गिलास ल्याएको ।” “अ–हुन्छ मामु ।” सानी सुस्तरी बोलिन् । आमालाई सानीको बानी थाहा थियो । उनले लकपकाएर बोलेको प्रस्टै चिन्नु भयो ।	Read more
किताब मेरो साथी – मनबहादुर खत्री ‘मनु’
on: जेष्ठ १९ , २०७८ बुधबार- ०७:४७
मेरो किताब सानो छ ज्ञानगुनमा रानो छ अंक अक्षरभित्र छन् रङ्गीचङ्गी चित्र छन् कथा मिठा कविता पढ्दा लाग्छ रमिता चिजविजका नाम छन् हाम्रो लागि काम छन् । क ख ए बि सि डी एक दुई वन टु सिंढी पढ्छौ ताली हानी गुरूआमा नानी । च्यात्नु हुन्न यसलाई कुच्नु हुन्न यसलाई	Read more
“किन किन आज मेरो मन स्थिर छैन । दरबारको भोगविलास, रमझम सबैदेखि नै वाक्क लागेको छ । आजदेखि नै म राजगद्दी त्याग्न चाहन्छु ।” गौडका राजा प्रचण्डदेवले राजसभामा घोषणा गरे । “महाराज ! हजुरले के भनिबक्सेको यस्तो ? राजाले नै राजगद्दी त्यागेपछि कसरी चल्ला राज्य ? राज्य र	Read more
बालक र पुस्तक – रञ्जुश्री पराजुली
on: जेष्ठ ३ , २०७८ सोमबार- ०५:००
प्रारम्भः सोझो अर्थमा हेर्दा पुस्तक भनेको बुद्धि विकासका लागि तयार पारिएको अध्ययन सामग्री हो । पुस्तक एउटै विषयमा लेखिएको पनि हुन्छ र विभिन्न विषयमा लेखिएको पनि हुन्छ । एउटा पुस्तक एउटै लेखकद्वारा लेखिएको पनि हुन्छ र विभिन्न लेखकद्वारा लेखिएका सामग्रीहरू समावेश गरेर पनि तयार पारिन्छ । आज	Read more
सरकार भर्सेस सरकार – बलराम तिमल्सिना
on: जेष्ठ २ , २०७८ आईतवार- ०७:१८
परिवार पनि हो रहेछ एउटा सरकार ! जस्तो कि आमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ सेरेमोनियल बा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कार्यकारी हामी बच्चा बच्चीहरू जनता हुने रहेछौँ । कहिले चकलेट मागेर नारा लगाउँछौँ कहिले पानीपुरी मागेर जुलुस निकाल्छौँ नारा जुलुस बढी भयो भने बाले लाठी चार्ज गर्नु हुन्छ आमाले पानीको फोहोराले हान्नु हुन्छ हामी	Read more
जङ्गलको भान्छा – रमेशचन्द्र घिमिरे
on: बैशाख २४ , २०७८ शुक्रबार- १२:२७
लमजुङको सुन्दर गाउँ भोर्लेटारनजिकै पिस्ती खोला बगेको छ । त्यहीँमाथि बाघमारे वन छ र त्यहाँभन्दा पनि माथि डाँडामा भोर्ले नामको सानो र चुटुक्क परेको गाउँ छ । एकपटक भोर्ले गाउँमा रमाइलो पिकनिक गर्ने भनेर जङ्गली जनावरको योजना बन्यो । खरायोले रिहिने वन, रानीवन, गुम्बा-हल्लेसी वन र लामसोतीको वनमा गएर कटुवाललेझैँ	Read more
on: चैत्र १ , २०७७ आईतवार- ०२:३१
बाबा आमा हाम्रा घाम जुन झैँ राम्रा हाम्लाई राम्रो नाना दिन्छन् मिठो खाना । रात दिन भरी विर्सी घाम झरी दुःख सारा गर्छन् हाम्रै लागि मर्छन् । इच्छा राख्छन् उनी असल हामी हुनी सबले मानुन् भन्छन् खराब भए रुन्छन् । धन, ज्ञान दिन्छन् जिम्मेवारी लिन्छन् बराबर ठान्छन् सन्तान् प्यारा मान्छन्	Read more
on: फाल्गुन ८ , २०७७ शनिबार- ०५:५९
ओरालोमा झरी कैले उकालोमा चढी नथाकेर घुम्छन् सधैँ घडीभित्र छडी । कान्छो भाइ जाँगरिलो छिटो फन्का मार्छ अल्छी गर्छ माइलो भाइ खुट्टा ढिलो सार्छ जेठो भाइ जैल्यै बस्छ टक्क अडी-अडी तर आफ्नै सुरमा घुम्छन् घडीभित्र छडी । बाह्रवटै देशमा पुग्छन्, हेलो हाई गर्छन् बाह्र बजे तिनै भाइ भेट्छन् मक्ख पर्छन्	Read more